EMUI 10 dia haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny volana aogositra | Androidsis
Ireo herinandro EMUI kinova 9.1 dia efa natomboka, izay tonga amin'ny telefaona Huawei isan-karazany. Na dia lNy marika sinoa dia mamarana ny antsipirian'ny EMUI 10, ilay kinova vaovao izay hiorina amin'ny Android Q. Amin'ity kinova an'ity sosona ity dia nihaino vaovao nandritra ny herinandro maro izahay, miaraka amin'ny manivana ny sarinao voalohany. Fantatsika bebe kokoa momba azy izao.
Satria fantatsika rahoviana no haseho amin'ny fomba ofisialy ny EMUI 10. Tsy maintsy miandry herinandro vitsivitsy isika vao ho ofisialy, saingy mampanantena izy io fa ho fanombohana lehibe ho an'ny marika sinoa. Satria io sosona io dia miorina amin'ny Android Q, araka ny efa fantatra.
Amin'ny fihaonamben'ny mpamorona manaraka izany, izay ankalazain'i Huawei eo anelanelan'ny 9 sy 11 aogositra any Sina, EMUI 10 haseho amin'ny fomba ofisialy. Na dia efa misy hetsika manokana aza ny fampisehoana ny kapaoty, izay atao amin'ny 9 amin'ny 15:20 hariva, ora eo an-toerana. Napetrakay tamin'ny kalandrie io daty io.
Na dia ny volana aogositra aza ny fampisehoana azy, amin'izao fotoana izao dia mbola tsy misy vaovao momba ny daty ahafahana mametraka azy amin'ny telefaona marika. Azo antoka fa tsy amin'ny volana septambra na oktobra vao hisokatra io vanim-potoana io. Saingy tsy maintsy miandry ny Huawei hilaza amintsika bebe kokoa momba izany isika. Angamba betsaka kokoa ny ho fantatra amin'ity hetsika ity.
EMUI 10 dia havoaka amin'ny ampahany betsaka amin'ny telefaona ankehitriny ny marika sinoa. Mety mitovy izy ireo nahazo EMUI 9.1 tamin'ity herinandro ity. Na dia tsy maintsy miandry fanamafisana vitsivitsy avy amin'ny orinasa aza izahay. Mandritra izany fotoana izany dia manohy miasa amin'ny HongMeng OS ilay orinasa, izay ho tonga amin'ny telefaona vaovao.
Na ahoana na ahoana, dia ho tonga isika Mihaino ny vaovao fantatsika momba ny EMUI 10. Ny orinasa dia tsy nilaza na inona na inona momba ny vaovao azontsika antenaina amin'ity kinova vaovao ity. Toa mitady hitandrina ny famolavolana mitovy amin'ilay ankehitriny izy ireo, saingy afaka manantena fiasa vaovao sasany ao isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » EMUI 10 dia efa manana daty fametrahana